4.8.20 MCS COVID-19 अपडेट – मेसन सिटी स्कूलहरू COVID-१ Head मुख्यालय
4.8.20 MCS COVID-19 अपडेट
रिमोट सिक्ने हामी सबैको लागि नयाँ छ. हामी सबै समायोजन र "स्कूल गर्ने" को नयाँ तरिकामा अनुकूल हुने रूपमा।, तपाइँका शिक्षकहरू र प्रिन्सिपलहरूले तपाइँको बच्चालाई समर्थन गर्न सक्ने तरिकाहरूको बारेमा तपाइँको प्रतिक्रियालाई स्वागत गर्दछन्.
हेर्नुहोस् यो भिडियो अधीक्षक जोनाथन कूपर बाँडफाँड गर्ने तरीका परिवारहरूले मानसिक स्वास्थ्य सहायता पहुँच गर्न सक्दछन् जबकि भवनहरू बन्द छन्.
आज बेलुका २ बजे सम्म, त्यहाँ मेसन सिटी स्कूलहरूमा COVID-19 को कुनै पुष्टि घटनाहरू छैनन्, र 5,148 ओहायो मा पुष्टि मामलाहरु. तल हाम्रा परिवारहरू र जनताबाट साझा प्रश्नहरूको जवाफ दिइन्छ।
अब हामीलाई थाहा छ हामी कम्तिमा मे सम्म स्कूलमा फर्किने छैनौं, मेसनको योजना के हो कि विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको लाकरबाट वस्तुहरू लिन?
अप्रिल को हप्ता को दौरान 13 र अप्रिल 20, मेसन हाई स्कूल, मेसन मिडिल स्कूल र मेसन इन्टर्मीडिएट स्कूल परिवारहरूको लागि टाढाको शिक्षाको अनुभवको लागि आवश्यक पर्ने लाकरहरूमा छोडिएका चीजहरू पुनः प्राप्त गर्ने अवसरहरू हुनेछन्।. सामाजिक दूरी आवश्यकताहरू कायम गर्न, परिवारहरूलाई कारमा रहन आग्रह गरिनेछ, र तपाईंको बच्चाको वस्तुहरू तपाईंको गाडीको ट्रंकमा राखिनेछ. MHS प्राचार्य बबी Dodd, MMS प्रिंसिपल लॉरेन जेन्टेन र MI प्रिंसिपल एरिक मेसेरले शुक्रवार सम्म तपाईंको स्कूलको विशिष्ट योजनाहरू साझा गर्नेछन्.
हामी बुझ्दछौं कि हाम्रो केहि MECC र मेसन इलिमेन्टरी स्कूलका विद्यार्थीहरूले उनीहरूको कक्षाकोठामा वस्तुहरू छोडेका हुन सक्छन्, वा भवनको अन्य भागहरूमा. अहिलेको समयमा, हामी विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको कक्षाबाट आइटमको साथ पुनर्मिलन गर्न सक्षम छैनौं. हामी हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य साझेदारहरूसँग काम गर्न जारी राख्नेछौं, र हामी तपाईंलाई थाहा दिनेछौं जब हामीले योजनाको निर्धारण गरेका छन जसले आइटमहरूको अधिक विस्तृत-प्रसार लिन अनुमति दिन्छ।
मेरो बच्चाको क्रोमबुक काम गरिरहेको छैन. हामी के गर्छौ?
पहिलो, ईमेल समर्थन@masonohioschools.com र हामी यसलाई वास्तवमै मिलाउन प्रयास गर्ने छौं।
यदि हामी यसलाई ठीक गर्न सक्षम छैनौं भने:
प्रिन्ट गर्नुहोस् यो पाना वा हातले कागजको पानामा मुद्दाको विवरण लेख्नुहोस्.
यस पुस्तिकालाई Chromebook भित्र स्लाइड गर्नुहोस् (स्क्रिन र कुञ्जीपाटी बीच)
मेसन इलिमेन्टरीमा आउनुहोस् (6307 मेसन मोन्टगोमेरी आरडी) 8 AM-10AM वा 12 PM-2PM बीच (M-F) यसलाई बाहिर बदल्न.
मेरो बच्चाले बस चढ्न छोड्छ. जे भए पनि स्कूल बस आउन सक्छ?
यस समयमा जब भवनहरू बन्द हुन्छन्, हामीलाई थाहा छ केही धूमकेतुहरू हराइरहेका छन् उनीहरूको बस चालकहरू र बसमा सवार भएर. साथै हामीसँग उनीहरूको साथी वा विस्तारित परिवार बिना विशेष जन्मदिन माइलस्टोनहरू मार्क गर्दैछ. हाम्रो टाढाको दिनहरूलाई सामाजिक दूरीको समयमा यस समयलाई अझ विशेष बनाउन मद्दत पुर्‍याउन, हाम्रो मेसन शहर स्कूल यातायात विभाग तपाईंको धूमकेतु विशेष धूमकेतु कनेक्टर बस संग यात्रा गर्न तिर्न खुशी हुनेछ!
प्रयोग गर्नुहोस् यो फारम तपाईंको घर आउन र तपाईंको धूमकेतु मनाउन धूमकेतु कनेक्टर बसमा दर्ता गर्न साइन अप गर्न!
धूमकेतु तपाईको पैदल यात्रा: परिवारहरू सामाजिक कार्य गर्नका लागि स्वतन्त्र वा बजेट अनुकूल हुने चीजहरू लिएर आउँदैछन्, हामी एक धूमकेतु चाक तपाईंको वाक चुनौती को प्रायोजित गर्दैछौं. हामी तपाईंलाई उज्यालो सिर्जना गर्न आमन्त्रित गर्दछौं, ड्राइभवेमा र हाम्रो कम्युनिटीभरि फुटपाथहरूमा सकारात्मक सन्देशहरू. यसमा तपाइँका चित्रहरू सबमिट गर्नुहोस् फेसबुक घटना वा ईमेल गरेर [email protected].
तपाइँ #CometStrong हुन को लागी सबै को लागी धन्यवाद!